I-BizChat: Unxibelelwano lweqela kunye nokuBambisana | Martech Zone
Kwasekuqaleni, kwiintsuku zokukhula okuphezulu kwe-ExactTarget (ngoku eyiSalesforce), isixhobo esinye inkampani engenakwenza ngaphandle kukaYahoo! Umthunywa. Ngaphandle kwesigijimi esihlala sihlekisa esathumela umyalezo othi "Ndiyekile" kumqeshwa oshiye ilaptop yakhe ivulekile kwaye wangena, isixhobo besinganyanzelekanga ukukhawulezisa unxibelelwano. Ewe, sakuba sifike kumakhulu aliqela abasebenzi, esi sixhobo saba yinto engenakwenzeka kwaye i-imeyile yaba sisixhobo sethu esiphambili… kodwa hayi indlela ekwakubi ngayo.
I-Slack yaphakama yaduma kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwaye ngelixa ezinye iinkampani ziyithanda… ezinye zinayo ukhalaze ngendlela angalungelelananga ngayo Ijelo lonxibelelwano linokuba ngaphezulu kwexesha. Ndikholelwe, ndiyaluqonda unxunguphalo lweenkqubo ezininzi zolawulo lweprojekthi, amaqonga onxibelelwano amaninzi, kunye ne-imeyile. Ndinabaxhasi abasebenzisa iFacebook Messenger, abanye iBascamp, abanye iBluepod… kwaye uninzi lwabo basebenzisa i-imeyile. Kwi-imeyile yam, ndinezixhobo ezizodwa zokucoca kunye nokubekwa phambili. Yiphupha elibi eli!
BizChat Yakhelwe iinkampani ukuba zizise lonke unxibelelwano kunye nentsebenziswano kwindawo enye.
BizChat Lunqanaba lokhuseleko lweshishini kunxibelelwano kunye neapp yokusebenzisana. Unokwenza ingxoxo yeqela kwaye wabelane ngemiyalezo ethe ngqo kwilifu. Sisicelo esisebenziseka lula esikuvumela ukuba wabelane ngezithuba ezibanzi zenkampani, wenze ukwabelana ngefayile naphina, nanini na.
BizChat inesikhombisi esinamandla esisebenza phakathi esikunika ukufikelela kubo bonke abasebenzi ngokukhawuleza ngokukhwela kubo bonke abasebenzi. Unokwenza ngokulula kwaye unike imisebenzi kwaye wenze amanqaku ekuhambeni. Ungatshintsha ukusuka kwidesktop uye kwizixhobo eziphathwayo kwaye ugcine yonke into ingqamene. Ngaphandle koko, kunjalo isimahla ukuya kuthi ga kubasebenzisi abali-100.
BizChat unikeza iNgxoxo yeQela, ukuThumela uMyalezo ngokuthe ngqo, umnxeba, iZithuba ezibanzi zeNkampani, kunye nokwabelana ngeFayile kwindawo enye. Iqonga lenza lula unxibelelwano lweqela kwaye lidibanise izixhobo kunye nomsebenzi ofunyanwa kukunxibelelana kweshishini imihla ngemihla. Eyona nto ibaluleke kakhulu, i-BizChat ibonelela ngethuba lokuguqula iincoko zakho zeshishini zibe zizenzo. I-BizChat ibonelela ngento emangalisayo yokudala kunye nokwabela imisebenzi ngokuthe ngqo kwiincoko zakho kunye nokumakisha imiyalezo ofuna ukubhekisa kuyo kamva.
tags: bizchatIntsebenziswanounxibelelwano lwangaphakathiulawulo lomsebenziimisebenzi
Imizekelo esi-7 engqina ukuba i-AR inamandla kangakanani kwintengiso